Ogaden News Agency (ONA) – Dhaqanka Maleeshida Liyu Police-ka iyo Siyaabaha Loo Barbaariyo – By Xayi Yare
Dhaqanka Maleeshida Liyu Police-ka iyo Siyaabaha Loo Barbaariyo – By Xayi Yare
Posted by ONA Admin	/ November 25, 2014
Waxaa silsilad noqday Xasuuqa Shacabka Ogadeniya xasuuqaaas waxaa Masuul ka ah Maaamulka Kililka Iyo Xukuumada Atoobiya. Maamulka kililka waajibaadkiisa waxaa ugu horeeya inuu Ciidanka Itoobiya u sahlo inuu si fudud u gumaado dadka rayidka ah, waxaana maamulkaasi uu amar ku siiyay maleeshiyaaka inta badan daroogaysan ee Liyu Police-ka (Hawaarin) ee la socda Ciidanka gumaysiga Atoobiya inay horqaadaan Ciidanka gumaysiga kadibna soo qabqabtaan dadka shacabka ah oo isugu jirra Haween Caruur Iyo Arday aan wax dambi ah galin. Xasuuqa Iyo dhacdooyinka ka dhaca wadanka Ogadeniya ayaa noqday kuwo ka sii daraya maalinba maalinta ka dambeeysa.
Qoraalkan waxaan ku eegi doonaa intuu Alle inaga garansiiyo dhaqankan qodobo ay ka mid yihiin; Maleeshiyada daroogada quuta ee Liyu Polic (Hawaarin ), Xasuuqa Shacabka Iyo Haanyarida maamulka Kililka. Aniga oo ogsoon in meelo badan Iyo Siyaabo kala duwan looga Faalooday ayaan hadana doonayaa inaan Akhristaha Xasuusiyo Xasuuqa Shacabka Ogadeniya Iyo Cida u sahashay in Ciidanka gumaysigu gumaado shacabkeena
Dahqanka maleesiyada Liyu Police (Hawaarin) ?
Xukuumada gumaysiga Itoobiya ayaa qoratay sanadkii 2007 maleeshiyadan si Ciidanka gumaysiga u horqaadaan. Waxaan laba isku diideynin in Liyu Police yihiin Dahalinyaro loo sahlay isticmaalka daroogada iyagoo dhalinyaradaa intooda badan lagu qasbay inay diidankan ka mid noqdaan iyagoo lagu Xasuuqo ama lagu gumaado dadka shacabka ah ee ay ka dhasheen. Dhalinyaradan lagu magacaabo Liyu Police, dadweynahana u yaqaanaan Hawaarin, waxaa xoog looga soo qafaashaa deegaanada dalka kadibna waxaa lagu maan dooriyaa waxyaaba badan oo khamriga iyo daroogada ay ka mid yihiin, Iyada oo ay u jeedadu tahay in qof kasta oo ka mid noqda Liyu Police uuna yeelanin caqli uu ku dareemo in dadka la Xasuuqayo yihiin walaaladii, waliba uu isagu noqdo kan ugu bahalsan Xasuuqida Shacabkiisa, isagoo ugu dambeeyn aan badbaadin doonin Xataa Waalidkii.
Dhaqanka maleeshiyada Liyu Police oo ah tan ugu liidata dhaqanka aadanaha oo ah Maleeshiyo hubeeysan oo hadana daroogaysan oo aan Illaahay Iyo Adoonkii midna ka baqaynin waxa laga sugaaba waa uun siduu gumaysiga ugu talagalay oo ah Akhlaq xumo Iyo xasuuqa shacabka. Waxay ku caan baxeena waa laynta dadka rayidka ah , boobka hantida shacabka, Kufsiga Haweenka, xadhiga aan dadka loo kala aabayeelayn. Waxay aad u jecel yihiin wax walba oo dhaqan ahaan u ekeysiinaya askariga Itoobiyaanka ah. Tusaaale ahaan Khamrida Iyo wixii lid ku ah dhaqanka Soomaliyeed ayay jecel yihiin inay dibadaha ula soo baxaan. Waxaad arkaysaa Iyaga oo xitaa Geela baraya Sigaarka.
Maleeshiyadan Hawaarinta oo gadhwada Ciidanka gumaysiga Itoobiya ayaa tacadiga ugu badan u gaysta Haweenka, Caruurta, ganacsatada Iyo dadka reer guuraaga ah. Mana jirto cid ka hadasha waxyeelada ay shacabka u gaystaan. Culimada Iyo waxgarada dalka Ogadeeniya waxaa la gaadhsiiyey heer ayna xataa ka hadli karin xaaskooda hadii hortooda lagu faraxumeenayo. Waxaana arinta sababay maamulka Cabdi Iley madaxda ka yahay oo u fasaxay dhalinyaradaa Liyu Polic-ka inay dilaan qofkay doonaan.
Hanyarida Maamulka Kililka ?
Hanka maamulka Kililku ma dhaaafo Xasuuqa shacabka Iyo dacaayadaha lagu bahdilayo sharafta shacbaka Somaliyeed ee daga dalka Ogadeniya Iyada oo dacaayad Iyo horumar been ah oo aan jirin loogu furay meel Tv ah balse aan anigu ku tilmaamay inay tahay Shaneemo fisqiga lagu barayo Caruurta Ogadeniya. Mid ka mida maamulayaasha Shaneemada (ESTV) oo codsaday in magaciisa la qariyo ayaa yidhi; “Hadaan TV-ga ka soo dayno barnaamijyo waxtar u leh bulshada Xabis Iyo Ciqaab daran ayaan mutaysanaynaa. Xataa hadii aan kasii dayno barnaamijyo diini ah waxaa nalagu qasbi in sidoo kale aan ka sii dayno barnaamijyo diinta masiixiga ah. Sidaa darted waa inaan ku celcelino uun dhaantadaas dhaanto xabashida oo kale ah.”
Su aasha in la is waydiiyo mudan ayaa ah maxaa u diiday Aqoonyahanka Maamulka Kililka ama Siyaasiga inuu Dadkooda u istaago oo uu ka dhiidhiyo Xasuuqa shacabka isaga oo u maraya nidaamka dawliga ah ee uu isagu aaminsan yahay Maxaase u diiday inuu Madaxweyne ka noqdo Dawlada dimuqraadiga Iyo fadaraalka uu sheegto?
Lasoco qaybta dambe ee qoraalkan
By Xayi Yare